१० कारणले गर्दा महिलाहरु परपुरुषसँग स’म्बन्ध राख्छन् ! - News20 Media
February 28, 2020 February 28, 2020 N20LeaveaComment on १० कारणले गर्दा महिलाहरु परपुरुषसँग स’म्बन्ध राख्छन् !
विवाहित जीवनमा मायाको साथसाथै शारी’रिक स’म्बन्धको आवश्यकता सबै महिला तथा पुरुषलाई हुने गर्दछन् । पुरुषहरु यौ’नसँग जोडिएको कुनै पनि कुरा आराम तथा ढुक्कसँगले आफ्ना श्रीमती तथा साथी भाइसँग खुलस्त रुपमा साटासाट गर्ने गर्दछन् । तर महिलाहरु यौ’नको मामिलामा कुरा तथा विश्लेषण गर्न लजाउने तथा हिच्किचाएको महशुस गर्दछन् ।
यसै कारण महिलाहरु यौ’नको चरम सुख तथा आनन्दको बारेमा केही पनि बोल्दैनन् । यौ’न एक यस्तो आगो हो जुन बलेपछि सरल रुपमा शान्त हुँदैन् । कतिपय महिलाहरु विभिन्न कारणले परपुरुषसँग यौ’न सम्बन्ध बनाउने गर्दछन् । श्रीमानको मायाको कमी , श्रीमानको अनुपस्थिति, अनमेल तथा बहुविवाह आदि कारणहरुले उनीहरु परपुरुषसँग यौ’न सम्बन्ध राख्ने गरेको पाइएको छ ।
महिलाले परपुरुषसँग स’म्बन्ध राख्ने कारणहर यस्ता छन् :
१. ग’र्भ निरो’धकका साधनको विकास गर्भ निरो’धकको साधनले पनि महिलाहरुलाई परपुरुष अर्थात ना’जायज सम्बन्ध राख्न सजिलो भएको छ । यसको अर्थ यो हो की पहिला जब ग’र्भ निरोधकको साधन उपलब्ध थिएन त्यति बेला महिलाहरु गर्भ रहने डरले परपुरुषसँग सम्ब’न्ध राख्दैनन् थिए । यस्ता सम्बन्ध राखेर महिला ग’र्भव’ती भएमा समाजमा ति महिलालाई घृ’णाको दृष्टिले हेरिन्थ्यो । आजभोलि गर्भ निरो’धकको साधनले सहज बनाएको छ ।
२. विवाहमा अयोग्य पुरुष आजभोलि पनि कतिपय गाउँमा महिलाको विवाह सानै उमेरमा धेरै उमेरको पुरुषसँग गरिदिने चलन रहिआएको छ । कतिपय गाउँका आमाबुबाहरु आफ्नो छोरीको विवाह महिनावा’री भन्दा गरिदिएमा स्वर्गको ढोका खुल्ने विश्वास गर्ने गर्दछन् । त्यतिमात्र नभएर छोरीको विवाह गरेपछि आफ्नो टा’उकाको बोझ हटेको सम्झने गर्दछन् ।
यो विवाह छोरीको लागि कतिको घातक छ भन्ने कुरा उनीहरुलाई थाहा हुन्न । विवहा पश्चात महिलाहरु धेरै उमेरका पुरुषसँग बस्न सक्दैनन् । उनीहरु बीचमा न यौ’न सन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ न सोच नै मिल्छ । यस्तै महिलाहरु परपुरुषसँग स’म्बन्ध बनाउन आ’कर्षित हुन्छन् ।
३. पश्चिमी समाजको प्रभाव पश्चिमी समाजको युवा तथा युवती विवाह अगाडि नै यौ’न आनन्द लिन्छन् । तिनिहरु एकलाई छोडेर अर्कोसँग विवाह गरिसकेका हुन्छन् । तिनिहरुको स’म्बन्ध केही दिनमा नै टु’टेर जाने गर्दछ । तिनीहरुले ना’जायज स’म्बन्धलाई बढी प्राथमिकता दिने गर्दछन् ।
यस्तै सिको सिकेर भारत तथा नेपालमा पनि परपुरुषसँग स’म्बन्ध राख्ने प्रचलन बढेको छ । फलस्वरुप पश्चिमी समाजको प्रभाव पूर्वीय समाजमा पनि बढ्दो छ ।
४. पतिको परस्त्रीसँग स’म्बन्ध कतिपय श्रीमानको अफेयर बाहिरी महिलासँग हुने गर्दछ । जसका कारण पुरुषहरुले आफ्नो श्रीमतीलाई मायाको दृष्टि’कोणले हेर्दैनन् । श्रीमानको यही व्यव’हारले महिलाहरु एक्लो’पनको महसुस गर्ने गर्दछन् । त्यसैले महिला पनि त्यस समयमा कसैको माया तथा साथको अपेक्षा गर्ने गर्दछिन् । र उनले यौ’न स’म्बन्ध पनि राख्दछिन् ।
५. पैसाको ला’लच पैसाको ला’लचमा पनि महिलाहरु कुनै धनी पुरुषसँग स’म्बन्ध बनाउन तयार हुन्छन् । तिनीहरुले भौतिक सुख त प्राप्त गर्दछन तर शारी’रिक सुख प्राप्त गर्न पाउँदैनन् त्यसै कारण उनीहरु परपुरुषलाई रोज्ने गर्दछन् । त्यस्तै श्रीमानद्धारा महिलाहरुको इच्छा पूरा नहुनुमा कम आम्दानीको कारण पनि हो । यश ,आरामको जिन्दगी नदिए पछि महिलाहरु बाहिरको पुरुषसँग सम्बन्ध राख्न तयार हुन्छन् ।
६. यौ’नमा असन्तुष्टि कैयौँ पटक महिलाहरु आफ्नो श्रीमानसँगको यौ’न सम्ब’न्धमा सन्तुष्ट हुन सक्दैँनन् । आफू सन्तुष्ट भए नभएको कुरा पनि उनीहरु खुलेर भन्न सक्दैनन् । जसका कारण उनीहरु परपुरुषसँग यौ’न स’म्बन्ध राख्न आकर्षित हुन्छन् ।
७. उमेरको अन्तर कुनै पनि महिलाको विवाह समान उमेरको पुरुषसँग नगराउने एक ठूलो समस्या हो । महिलाको विवाह कम उमेर होस् वा धेरै उमेरको दुवै विवाहमा महिलालाई नै दुख हुने गर्दछ । अयोग्य विवहामा पुरुषलाई त यौ’न सन्तुष्टि हुन्छ तर महिलालाई यौ’न सन्तुष्टि प्राप्त हँुदैन् । महिलालाई यौ’न सन्तुष्टि नमिल्ने कारण उनीहरु परपुरुषसँग स’म्बन्ध राख्न बाध्य हुन्छन् ।
८. यौन’को बारेमा अल्पज्ञान यौ’नको मामिलामा पुरुषहरुको मानसिकता अजी’बको हुने गर्दछ । पुरुषहरु महिलाको साथमा यौ’न स’म्बन्ध राखेको समयमा आफ्नो सन्तुष्टि तथा आनन्दको प्राप्ति मात्र चाहान्छन् । जसको आ’वेगमा उनीहरु यौ’न सम्ब’न्ध भन्दा पहिले फोरप्ले गर्न पाउदैनन् ।
महिलाहरुलाई फोरप्ले पछि पनि यौ’न स’म्पर्क राख्न मन पराउछन् । पुरुषहरु आफ्नो आनन्दको च’क्करमा महिला सन्तुष्ट भए वा भएनन् भन्ने जान्न कोसिस पनि गर्दैनन् । जसको कारण महिलाहरु खुसी हुदैनन् र अन्य पुरुषहरुसँग यौ’न सन्तुष्ट पाउन सम्बन्ध राख्ने गर्दछन् ।
९. आपसी झ’गडा तथा मनमुटाव झ’गडा तथा आपसी मनमुटाव हरेक श्रीमान् तथा श्रीमतीमा हुने गर्दछ तर आवश्यकता भन्दा बढी झ’गडा तथा मनमुटाव राम्रो हुँदैन् । आपसी झ’गडा तथा मनमुटावले कतिपय महिला तथा पुरुषहरुको बोलीचाली समेत बन्द हुने गर्दछ त्यति मात्र नभएर उनीहरु बीचमा यौ’न स’म्बन्ध समेत हुन पाउँदैन् । फलस्वरुप पुरुषले परस्त्री तथा महिलाले परपुरुषसँग स’म्बन्ध राख्ने गर्दछन् ।
१०. एक्लो’पन कुनै पनि समयमा आफ्नो श्रीमान साथमा नहुदा महिलाहरुलाई एक्लो’पनको महसुस हुने गर्दछ । कुनै पनि समय श्रीमान कामको सिलसिलामा तथा अन्य कारण देश भन्दा बाहिर कुनै ठाउँमा जादा एक्लो’पनलाई टाढा गराउन उनीहरु परपुरुषसँग यौ’न सम्ब’न्ध राख्ने गर्दछन् ।